Andro iray ao amin'ny foibe famokarana herinaratra nokleary Chernobyl - Fiomanana | Vaovao momba ny dia
Fantatsika rehetra ny tantara mampalahelo an'i Chernobyl (Okraina), ny toby nokleary misy azy ary ireo olona nonina nanodidina azy.
Saingy efa nanontany tena ve ianao raha afaka mitsidika na manao karazana fizahantany? Nanontany ny tenako aho ary ny valiny dia si, afaka mitsidika.
Ny foibe famokarana angovo nokleary sy Prypiat (tanànan'ny matoatoa, reharehan'ny maoderina sovietika) no misy mandeha adiny 2 fotsiny miala an'i Kiev, renivohitry ny firenena, sahabo ho 100 kilometatra avaratra, akaikin'ny sisintany miaraka amin'i Belarus.
30 taona taorian'ny loza dia avo dia avo ny haavon'ny fandotoana nokleary. Faritra roa manodidina ny 2 km (toerana tsy ahafahana miaina) sy 10 km (izay tsy tokony hitoerana) manodidina ny afovoany no voafaritra. Mbola misy olona mipetraka ao anatin'io faritra io.
Ny governemanta Okrainiana dia manome ny fahafaha-manao masoivoho maromaro hanao fitsangatsanganana sy fitsidihana ny faritra fanilihana an'i Chernobyl. Amin'io andro io ihany dia afaka mitsidika ianao ary miverina.
Ny minisiteran'ny fahasalamana dia manery ny hisoratra anarana ireo mpizahatany rehetra miditra aminy mba hifehezana ny olona miditra sy miala.
1 Ahoana ny fandehanana ary inona no ho hita ao amin'ny faritra fanilihana?
2 Milamina ve ny mankany Chernobyl?
3 Mendrika handeha ve?
Ahoana ny fandehanana ary inona no ho hita ao amin'ny faritra fanilihana?
Es tsy maintsy manakarama masoivoho ary mandehana miaraka amin'ny mpitari-dalana manokana. Izy ireo no mitantana ny antontan-taratasy ilaina rehetra ho anao.
Ny ankamaroan'ny masoivoho dia manolotra fitsangantsanganana tanteraka mandritra ny 1 andro na 2 andro, matory ao amin'ny trano fandraisam-bahiny ao an-tanànan'i Chernobyl. Ny zotra dia mitovy amin'ny orinasa iray.
Ny safidy miverina avy any Kiev amin'io andro io dia manaraka ity làlana manaraka ity:
Fidirana ao amin'ny faritra fanilihana, fanaraha-maso fanoherana ny nokleary ary fisoratana anarana eo amin'ny point check 30Km sy 10Km. Rehefa lasa dia voafehy ny fandotoana nokleary.
Mizotra mamaky tanàna iray nilaozana tanteraka. Talohan'ny loza dia nisy olona 4000, ankehitriny tsy misy.
Tsidiho ny tanànan'i Chernobyl, ireo robot ampiasaina amin'ny fandotoana sy ireo tsangambato fahatsiarovana. Ny injeniera sy ny miaramila dia monina eto amin'ny fiovàna izay miandraikitra ny fanadiovana tanteraka ny faritra.
Miditra amin'ny akanin-jaza avela sy voaloto tanteraka. Tsy afaka manao an'io ampahany amin'ny fizahan-tany io ianao mandritra ny 30 minitra noho ny risika ara-pahasalamana.
Duga-3. Radar fanoherana ny balafomanga sovietika goavambe sy harafesina eo afovoan'ny ala.
Toeram-pamokarana nokleary Chernobyl: fitsidihana avy ivelan'ny tsirairay amin'ireo reactorany, ao anatin'izany ny isa 4, ilay nahatonga ny loza. Fitsidihana 5 na 10 minitra farafahakeliny, hidina fotsiny haka sary 4.
Ala Mena. Ny ala izay noho ny akaiky ny toby nokleary dia lasa mena. Raha jerena ny haavon'ny ala any amin'ity ala ity, dia tsy afaka mijanona ianao, mahita haingana sy mivezivezy fotsiny.
Pripyat, ilay tanàna nilaozana. Làlan'ny manodidina ny 2 na 3 ora amin'ny alàlan'ny tanàna avonavona sovietika. Tanàna iray tamin'izany fotoana izany no iray amin'ireo maoderina sy feno indrindra tamin'ny Firaisana Sovietika teo aloha. Nisy 40000 XNUMX ny mponina tao.
Sakafo ao amin'ny canteen Chernobyl, toerana tokana ahafahanao mihinana sy matory.
Ny safidy mijanona hatory ao sy manao fitsangatsanganana mandritra ny 2 andro dia mandinika izay rehetra voalaza etsy ambony fa amin'ny antsipiriany bebe kokoa. Izany hoe, na ao an-tanànan'i Chernobyl na any Pripyat, dia asiana fitsidihana ireo teboka marika rehetra ary mbola mijoro izany. Ho fanampin'izany, fijanonana bebe kokoa no atao any an-tsekoly sy hopitaly eny an-dalana.
Tsy fantatro raha tena mendrika ny misafidy ilay fitsangatsanganana 2 andro izany. Mandeha an-tongotra avy any Kiev izahay ary mieritreritra fa efa ampy izay. Miaraka amin'ny adiny 2 na 3 ao amin'ny Pripyat dia azonao atao ny mahita sy mahatsapa ny mampalahelo ny zava-drehetra. Omeo fotoana ampy hitsidihana ireo teboka manan-danja indrindra.
Milamina ve ny mankany Chernobyl?
Azo antoka fa io no fanontaniana faharoa apetrakao ary koa nanontany ny tenako aho rehefa nieritreritra ny handeha. Ny valiny dia: eny, fa.
Manaiky ny hanao fitsangatsanganana any an-toerana ny governemanta Okrainiana na eo aza izany tena miharihary ny haavon'ny fandotoana. Ny zotra rehetra dia misy zotra voafetra sy voasoratra. Soso-kevitra ary saika voatery tsy hiala amin'ny lalana arahin'ilay torolàlana amin'ny fotoana rehetra. Misy faritra izay mety 5 minitra fotsiny ary faritra tsy misy loto. Ireo torolàlana dia mitondra metatra fandotoana nokleary ambonin'ny tany amin'ny fotoana rehetra mba hiantohana ny fiarovana ireo mpizahatany.
Isaky ny teboka fanamarinana Ny fanaraha-maso ny fahasalamana sy ny fandotoana dia tanterahina, na rehefa miditra na mivoaka. Raha ny teôria dia tsy misy olona tokony voaloton'ny tabilao mandritra ny 1 na 2 andro. Raha sendra mahita faritra misy ny vatana amin'ny radioactivity dia atao ny fanadiovana sy ny fandotoana tanteraka.
Manoro hevitra aho mandehana miaraka amin'ny akanjo taloha sy tendrombohitra na fanatanjahan-tena. Izy io dia faritra rava tanteraka, maloto ary ala. Ny kiraro dia ho maloto (ary mety ho voaloto). Noho izany, tsara kokoa ny mitafy akanjo izay azontsika esorina raha sendra olana.
Mba hialana amin'ny fisalasalana, nanazava ireo masoivoho fa amin'izao dia ny fandehanana fiaramanidina 10 ora no mandoto kokoa amin'ny haavon'ny nokleary ho an'ny vatana noho ny 1 andro ao Chernobyl. Na ahoana na ahoana, tsy nankany amin'ny faritra fanilihana imbetsaka aho.
Mendrika handeha ve?
Ny fandehanana any Chernobyl dia karazana fizahantany tena hafahafa.
Fitsangatsanganana misy fiantraikany be io, azoko lazaina izany tsy misy toa azy na aiza na aiza eto an-tany. Ianao dia mamarana ny andro amin'ny amboaram-pitiavana alahelo, noho ny tantara ao ambadik'izany, ary tohina amin'ny zavatra hitanao rehetra.
Heveriko fa a safidy tsara aleha any amin'ny faritra misy toby nokleary raha mandeha any Kiev ianao. Manana zavatra maro hatolotra ny renivohitra, fa ao anatin'ny adiny 2 amin'ny fiara dia afaka manao an'io fitsangatsanganana miavaka io ianao.
Ao amin'ny lahatsoratra manaraka dia hasiako tsipiriany ny zavatra niainako sy izay rehetra hitako, miaraka amin'ny sary manaitra.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » tanàna » Kiev » Chernobyl, andro iray ao amin'ny toby famokarana angovo nokleary (ampahany I) - Fiomanana
Izay tokony ho fantatrao raha hanao ny Camino de Santiago